Truecaller के हो? यसले कसरी काम गर्छ? के truecaller चलाउन सुरक्षित छ? (Truecaller बारे सम्पुर्ण जानकारी नेपालीमा) - Shreeram Adhikari
Home / Technology / Truecaller के हो? यसले कसरी काम गर्छ? के truecaller चलाउन सुरक्षित छ? (Truecaller बारे सम्पुर्ण जानकारी नेपालीमा)
by Shreeram Adhikari on August 31, 2020 in Technology
Truecaller के हो? यसले कसरी काम गर्छ? के truecaller चलाउन सुरक्षित छ? What is truecaller? How does it work? Is it safe to use truecaller?
Truecaller के हो?- सायद यसको बारेमा नसुनेको कमै होलान्। आजकल जो सँग स्मार्ट-फोन छ र सधै इन्टरनेटको पहुँच छ, ति प्राय सबैको मोबाइलमा यो एप रहेको हुन्छ। नहोस पनि कसरी, यो ट्रुकलर एपको उपयोगीता नै यति धेरै छ। कतिपय व्यक्तिलाई truecaller को बारेमा जानकारी पनि छैन होला, यदि केहि मात्रामा छ भने पनि त्यहि यस मार्फत हामी अनजान नम्बर (unknown number) पत्ता लगाउन सक्छौँ, अनि त्यो नम्बर कुन ठाउँको हो, कुन टेलिकम सर्भिसको हो, भन्ने मात्र। यो ट्रुकलर उपयोगी त छदैँ छ, तर हरेक चिजको फाइदा सँगै केहि बेफाइदा पनि लुकेको हुन्छ। त्यसैले हामी सबैको मनमा प्रश्न आउन सक्छ, कि ट्रुकलर के हो? (truecaller ke ho?) ट्रुकलरले कसरी काम गर्छ?(Truecaller le kasari kaam garchha?) ट्रुकलर चलाउन safe छ कि छैन?(Truecaller chalauna safe chha ki chhaina?)
आउनुहोस्, आज हामी यहि truecaller को बारेमा चर्चा गर्नेछौँ।
ट्रुकलर के हो?(True caller ke ho?) What is truecaller?
Truecaller एउटा डिजिटल ग्लोबल फोनबुक हो जसलाई हामी web वा app मार्फत प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो एउटा यस्तो application हो, जसले तपाईँलाई तपाईको स्मार्टफोनमा आउने unknown number को कलको बारेमा जानकारी दिन्छ। यो एप मार्फत तपाईँले लगभग सबै unknown call को बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
यो application एक प्राइभेट कम्पनी True Software Scandinavia AB ले बनाएको हो। जसको उद्देश्य भनेको एउटा यस्तो Global Digital Phonebook बनाउनु हो जहाँ पुरा बिश्वकै व्यक्तिहरुको फोन नंबर रहोस्। जसको मदतले Truecaller प्रयोगकर्ताले आफ्नोमा आउने हरेक unknown number सजिलै थाहा पाउन सकुन्।
ट्रुकलरले कसरी काम गर्छ?(True caller le kasari kaam garchha?) How does truecaller work?
Truecaller ले डाटा संकलन गर्नको लागि crowd source को प्रयोग गर्दछ। जब हामी Truecaller मा signup अथवा यो App आफ्नो मोबाइल मा install गर्दछौँ तब यसले हामीसँग केहि अनुमति permission माग्दछ। त्यहि permission मध्यको एक हो Contact Access को permission। जब हामी यस permission लाई Accept वा Allow गर्दछौँ तब यो truecaller ले हाम्रो मोबाइलमा save भएको सबै contacts हरुलाई हेर्न र आफ्नो सर्भरमा save गर्न सक्दछ। साथै truecaller ले हाम्रो फोनमा save भएको सबै contact हरुलाई आफ्नो सर्भरमा save गर्दछ।
यसै गरि Truecaller सँग हामी सबैको नाम र फोन नम्बर save हुँदछ। अब Truecaller मा तपाईले कसैको नम्बर search गर्नुभयो भने अथवा कुनै unknown number बाट तपाईँलाई फोन आयो भने, Truecaller ले त्यो नम्बर पहिला आफ्नो सर्भरमा खोज्दछ। त्यसपछि truecaller को सर्भरमा त्यो नम्बर जुन नामले सेभ रहेको हुन्छ, त्यहि नाम incoming call मा अथवा search result मा देखाइदिन्छ।
यदि तपाईले truecaller प्रयोग गरिरहनु भएको छ भने तपाईले बिचार गर्नुभएको होला, कतिपय unknown number बाट फोन आउँदा व्यक्तिको नामको सट्टा नाता-गोताको रुपमा देखाउँछ। जस्तै ठुलो मामा, कान्छो भाई, भान्दाई, सानीमा वा कसैको nickname हरु। नेपालमा प्राय: नातागोताको नम्बरहरु नाताकै नाममा सेभ गरिन्छ, अनि जब Truecaller ले हाम्रो contact access गर्दछ, तब जुन नामले हाम्रो मोबाइलमा नम्बर सेभ भएको हुन्छ, त्यहि नाम उसले पनि आफ्नो सर्भरमा सेभ गर्दछ।
एउटै नम्बर फरक फरक मोबाइलमा फरक फरक नाममा सेभ गरेको होला अनि यस्तो अवस्थामा truecaller ले कुन चैँ नाम देखाउँछ त?) Which name does truecaller show if same number is saved in different devices with different names?
Truecaller को बारेमा यति जानकारी थाहा पाइसकेपछि तपाईको मनमा यो प्रश्न आउनु स्वभाविक नै हो। यस्तो अवस्थामा truecaller को server मा उक्त नम्बर सबैभन्दा पहिले जुन नाम सहित आउँछ, त्यहि नाममा सेभ हुन्छ र सर्च रिजल्टमा पनि त्यहि देखाउँछ । साथै यदि एउटै नम्बर धेरै जनाको contact list बाट truecaller ले पायो भने ति नामहरु मध्ये धेरै पटक दोहोरिएको नाम वा असली नाम जस्तो देखिने नाम चाहिँ truecaller ले आफ्नो सर्भरमा सेभ गरि अरु नाम हटाइदिन्छ।
अब तपाईको मनमा फेरि अर्को जिज्ञासा आयो होला कि, आफ्नो नम्बर truecaller मा के नामले सेभ भएको होला भन्ने। तपाईले आफ्नो नम्बर truecaller app अथवा www.truecaller.com मा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईलाई उक्त नाम मन परेन, अथवा अर्को नाम राख्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईले truecaller मा आफ्नो नाम परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।
ट्रुकलरमा आफ्नो नाम कसरी परिवर्तन गर्ने? (Truecaller maa aafno naam kasari pariwartan garne?) How to change name on truecaller?
1. यदि तपाई Truecaller app प्रयोग गरिरहनु भएको छ भने, तपाईले app भित्रै आफ्नो नाम परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ निर्देशन दिइएको छ:
Android मा : App खोल्नुहोस् र माथि बायाँ कुनाको menu बटनमा क्लिक गरेर edit profile मा गई नाम परिवर्तन गर्नुहोस्।
IPhone मा : App खोलि माथि बायाँ कुनाको profile icon मा क्लिक गरेर edit मा गई नाम परिवर्तन गर्नुहोस्।
2. यदि तपाई Truecaller प्रयोग गर्नुहैँदैन भने, तपाई यसको वेबसाइट www.truecaller.com मा गएर sign in गरि तलको निर्देशन पालना गर्नुहोस्।
▶आफ्नो नम्बर search box मा खोज्नुहोस्, suggest better name मा क्लिक गरेर आफ्नो नाम परिवर्तन गर्नुहोस् । Truecaller ले स्वतः केहि दिनमा उपयुक्त नाम छान्दछ।
Notice: यदि यदि तपाईले भर्खरै App मार्फत आफ्नो नाम परिवर्तन गर्नुभएको छ भने तपाइको विवरण update हुन 24-48 घन्टा सम्म समय लाग्न सक्छ।
के ट्रुकलर चलाउन सुरक्षित छ? (Ke truecaller chalauna surakshit chha?) Is it safe to use truecaller?
हामी सबैको मन र दिमागमा अब एउटै मात्र प्रश्न उब्जिन्छ। "के truecaller चलाउन सुरक्षित छ?"( Is it safe to use truecaller?) सायद यो प्रश्नको उत्तर तपाईले माथिका सबै कुराहरु पढेर पाइसक्नु भयो होला किनकी जब हामी यो app आफ्नो मोबाइलमा install गर्दछौँ तब यसले contact access को साथै यि permission हरु लिँदछ।
- Wifi connection information
- Device ID and call information
- Other permissions
हामीले यो एप इन्टल गर्दा यि सबै permission हरुमा allow/accept गर्नुपर्छ। त्यसपछि अब truecaller ले हाम्रो फोनबाट call र message समेत गर्न सक्दछ।
यस्तै गरि August 2019 मा एउटा समाचार आएको थियो कि truecaller ले user को अनुमती र जानकारी बिना नै UPI registration को लागि बैंकलाई sms मार्फत request पठाएको थियो। यो समाचारलाई स्वयं truecaller ले नै स्विकारेको थियो र truecaller को एउटा bug ले गर्दा यस्तो भएको भनेको थियो। अहिले उक्त bug लाई fix गरिसकेको कुरा पनि truecaller ले जनाएको छ।
फेरी यी एपहरुलाई तपाईले ति permission नदिइकनै चलाउँछु भन्न खोजेर मिल्दैन। ति permission हरु बिना यी एपहरु तपाइको मोबाइलमा install गर्न नै मिल्दैन। अब निर्णय तपाईको हातमा हुन्छ कि यो app चलाउने कि नचलाउने।
आफ्नो ट्रुकलर अकाउन्ट कसरी मेटाउने? (aafno truecaller account kasari metaune?) How to delete truecaller account?
कतिपय व्यक्तिलाई आफ्नो गोप्यता बनाइराख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै superstars, hero, heroine, politician, अथवा कुनै यस्तै प्रख्यात व्यक्तित्वहरु।
उनिहरु आफ्नो फोन नम्बर सिमित व्यक्तिहरुलाई मात्र थाहा होस् भन्ने चाहन्छन्। तर उनका नातागोता र साथीहरु मार्फत उनिहरुको नम्बर truecaller सम्म पुग्दछ। जसले गर्दा उनिहरुलाई अप्ठेरो पर्न सक्छ।
त्यसैले उनिहरु truecaller बाट आफ्नो विवरण मेटाउँछन्। उनिहरुले मात्र हैन, तपाईले पनि आफ्नो विवरणहरु truecaller बाट मेटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले तल दिइएको step हरु follow गर्नुहोस्।
Truecaller app खोल्नुहोस् > sign in गर्नुहोस् > माथी बाँया कुनाको तीन लाइनमा click गर्नुहोस् > setting मा click गर्नुहोस् > Privacy Center मा click गर्नुहोस् > 2nd last मा दिइएको Deactivate भन्ने option मा click गर्नुहोस्।
deactivate मा क्लिक गरेपछि तपाई सँग confirmation माग्दछ। Yes मा click गरेर डीएक्टिभेट गर्नु पर्दछ। यसरी नै तपाईले truecaller मा रहेको आफ्नो account delete गर्न सक्नुहुन्छ।
By Shreeram Adhikari at August 31, 2020
Lalita Adhikari2September 2020 at 09:13
Truecaller को बारेमा पुरै clear भइयो।